Demi Baloo gudaha KDE 4.13: Waxaan ku tusinaynaa siyaabaha lagu gaaro | Laga soo bilaabo Linux
Demi Baloo gudaha KDE 4.13: Waxaan ku tusineynaa siyaabaha lagu gaaro
Sida dad badani ogyihiin, laga bilaabo KDE 4.13 waa la badalay Nepomuk by tilmaame cusub oo la yiraahdo Baloo, iyo dabcan, ikhtiyaarrada ayaa waxyar iska beddelaya markii la furey.
Isticmaalayaal badan ayaa dhibaatooyin kala kulmay isticmaalka xad dhaafka ah ee processor qayb ka mid ah Baloo, laakiin maahan kiiskeygu. Xitaa, waa inaan dhahaa natiijooyinka raadinta ayaa hoomboro waxay u muuqdaan kuwo aad u dheereeya hadda. Laakiin haye, haddii aadan ka mid ahayn kuwa adeegsada Semantic Desktop-ka, qodobkaan adiga ayaa loogu talagalay adiga, sidaan ku tusinno dhammaan siyaabaha la yaqaan ee Daar Baloo.
1 Ka jooji Baloo garaaf ahaan
2 Demi Baloo adigoo isticmaalaya habab kale
Ka jooji Baloo garaaf ahaan
Hadda, markaan marinno Xulashada Nidaamka »Raadinta Miisaanka waxaan helnaa wax sidan oo kale ah:
Sida aad u aragto, ma jiro wax ikhtiyaar ah oo kale oo loo rakibo Disktop Search, markaa waa inaan u baahanahay qaabab kale. Sida muuqata habka ugu fiican ee hada looga hortagi karo Baloo ordo, ama ugu yaraan aan Index wax, waa by daray our / guriga meelaha laga reebay.
Demi Baloo adigoo isticmaalaya habab kale
Xaqiiqda ka reebida galkayaga maxaliga ah halka ay ku taal Baloo ayaa ku socota Indexing, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn xalka iyo sababo jira awgood isticmaalka CPU ayaa wali sareeya. Taasi waa sababta aan ugu adeegsan karno habab kale sida kuwa hoos ka muuqda.
Habka ugu horreeya ee beddelka ah wuxuu noqon karaa in laga hortago in Baloo bilaabo, sidaas darteed waxaan u fureynaa boosteejo oo aan dhignaa:
Hab kale, oo laga yaabo in yar lagu taliyo, waa in la ordo:
sudo mv / usr / bin / baloo_file_extractor /usr/bin/baloo_file_extractor.orig sudo ln -s / bin / run / usr / bin / baloo_file_extractor
sudo mv / usr / bin / baloo_file_cleaner /usr/bin/baloo_file_cleaner.orig sudo ln -s / bin / run / usr / bin / baloo_file_cleaner
Iyada oo ay taasi tahay in ka badan inta ku filan in la joojiyo Baloo ama ugu yaraan, ka ilaali isticmaalka CPU adoo fayl garaya faylashayada. Dabcan, waan ku celinayaa in kiiskeyga uusan aniga igu dhicin oo raadinta (ama halkii natiijooyinka) aad ayey u dhakhso badan yihiin. Macluumaad dheeraad ah ku saabsan Baloo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Demi Baloo gudaha KDE 4.13: Waxaan ku tusineynaa siyaabaha lagu gaaro
Tilmaam wanaagsan, kiiskeyga wax dhibaato ah ma qabin.
Dhanka, waxaan rabaa inaan weydiiyo: Baloo miyuu adeegsadaa Akonadi? Sababtoo ah waxaan had iyo jeer ka naafo ahaa (Akonadi iyo Nepomuk) haddana waxaan haystaa oo keliya orodka 'baloo'.
Eeg KDE UserBase wiki: http://userbase.kde.org/Nepomuk#Frequently_Asked_Questions
In kasta oo sifiican loo aqriyo wax walba.
Eeg KDE UserBase wiki:
Xiriirka ku lifaaqan waxay yiraahdeen waxaa jiri doona ikhtiyaar garaaf ah oo loogu talagalay KDE 4.13.1
Nepomuk - Baloo (Raadinta Desktop) Kala-guurka iyo macluumaadka isticmaale ee maqan
Aad u fiican boggan! 😉
KaOS dhibaato la'aan.
Dhibaatooyinka soo bandhigaya qaar ka mid ah dhibaatooyinka waxaan u maleynayaa inay noqon karto sababta oo ah sida loo soo baakadeeyay.
Isku mid kiiskeyga Kaos wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa baloo ...
Hagaag, ma aanan cusbooneysiin waqtigaan, waqti la'aan awgeed laakiin gadaal ayaan ka sameyn doonaa iyo waxa dhacaya, haddii wax walba ay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay dhib la'aan, laakiin haddii kale, markaa horay ayaad u daabacday xalka, Mahadsanid
Waxaan aqriyay in qaar ka mid ah distros aysan si buuxda u bedelin nepomuk, waxay curyaamiyeen astaamaha qaar waxayna leeyihiin dhinac socda baloo.
Waxaan sidoo kale haystaa kaos iyo baloo shaqooyin la'aan dhibaato.
Hagaag, curyaaminta Baloo way ka fududdahay isla Modus Operandi isku mid ah oo lala sameeyo Neponuk (taas oo, KDE-da nooca 4.8.4, oohinta ahayd)
Sikastaba, ma tahay ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo kujira KDE-Meta 4.13?
Runtu waxay tahay in Baloo uu ku dhaqmay si taxaddar leh qoobteyda Kubuntu 14.04 64, ma jirto sabab xilligan loo joojiyo 🙂
Waxaan rakibay Kubuntu 14.04 wax walbana way fiicnaayeen markii hore, laakiin markaa "Baloo" waxay soo bandhigeen dhibaatooyin xad dhaaf ah xusuusta, CPU, iyo dhaqdhaqaaqa disk ka badan 50 ilaa 60%, waxaan haystaa kombuyuutar casri ah oo waxqabad sare leh laakiin dhib ayay igu keentay. Sida muuqata tani waxay dhacdaa marka kumbuyuutarku leeyahay feylal aad u waaweyn oo ka weyn 10GB cabir ahaan, sida mashiinnada dalwaddii, gaar ahaan markay jiraan dhowr, oo ay la soo degsadaan durdurro waaweyn, si joogto ah ayey u baaraan.
Ku jawaab Gadeth
Waxaan sidoo kale la kulmay dhibkii ugu xumaa ee fikraddan raadinta cusub.
Hagaag, waxaan bilaabay raadinta xalka maalinta 2aad ee cusbooneysiinta KDE waxaanan helay habkan si aan u joojiyo.
Waa inaad furto feylkaan ku qarsoon diiwaanka gurigaaga .kde4 / share / config / baloorc
Kadib khadadkaas ayaa lagu darayaa feylka:
[Dejinta aasaasiga ah]
Indexing-Enabled = been
Xir qaybta desktop-ka iyo macsalaameynta isticmaalka aan dheellitirka ahayn ee barnaamijkan.
Waad salaaman tahay, kiiskeyga uma arko baahi loo qabo in la furo, runtu waxay tahay inay si fiican u shaqeyso. Baloo wuxuu iga cunaa wax aad uga yar kan Nepomuk, oo si dhib leh loo dareemi karo ... Haatan, waxaan uga tagi doonaa inuu socdo.
Waan ilaaway, waxaan isticmaalayaa Kubuntu 14.10. Haa hada…. Farxad! ^^
Gacaliye @elav: Ma xasuusataa markii aad maamuli jirtay gacaliyahaaga Debian + Xfce oo aan ka ciyaari jiray Arch + KDE? Bal u fiirso sida waqtiyadu isu beddeleen in maanta aad tahay qof ku faraxsan adeegsiga nidaamkaas iyo deegaankaas oo aniga naftaydu aad ugu raaxeysato Xfce ... halkii, aan ku helayo Xubuntu 😀
Xaqiiqdii, waxaan kusii wadaayaa ChakraOS mashiinka dukaanka iyo NAS, laakiin markaan xoogaa taabto waxay ila muuqataa in Xubuntu 14.04 ay tahay waxa kaliya ee aan ubaahanahay: minimalist iyadoo aan lumin adeegsiga, lana taageero laba sano iyo PPA-yada foosha xun ayaan hubiyaa hayso barnaamijyo cusub.
Noloshu waa omelette, saaxiibkay!
HAHAHAHA .. Ma rumeysan karo… O_O laakiin kuuma calaacalayo .. haddii aad sifiican u shaqeyneyso, waan ku faraxsanahay, aakhirka Jiirku wuxuu leeyahay soo jiidashadiisa .. 😀
Taas waxaad ku saxantahay, @elav. Si aan runta u sheegno, XFCE waxay ku habboonayd kitaabkayga netka.
Aan kuu sheego in KDE ay tahay qarax. Waxaan ku haystay kumbuyuutarka kumbuyuutarka in ka badan 10 bilood oo aan kuu sheego taas, in kasta oo markii iigu dambaysay ee aan isku dayo KDE duulimaadka, waxay ahayd markii aan Mandrake ku rakibey kombuyutarkayga hore waxaanan la yaabay isbeddelka KDE soo maray, isbadaladaas uu helayna waxay ahaayeen kuwo wanaagsan.
Sidoo kale, waxaan horeyba uga sameeyay horumar dhinacyo ah xiritaanka kumbuyuutarkeyga 'KDE desktop' anigoo siinaya qaabka eOS oo lagu daray OpenSUSE.
PS: KDE 4.12 wuxuu ka fiicnaaday GNOME 3.10 marka la eego waxqabadka iyo isticmaalka ilaha qalabka, Arch-ka wuxuu umuuqdaa GNOME 2.
In Chakra kuma jirto weli keydka xasilloon. Waxaan ku isticmaalayaa Arch (haa, mar kale ayaan dhacay, ma haysto xulasho) waxaanan ka baqayaa waxqabadkeeda aan caadiga ahayn. Khibradeyda shaqsiyadeed waa tusaha ugu dhaqsaha badan ee aan isku dayay. Marka laga hadlayo isticmaalka kheyraadka, sidoo kale waxaan u arkaa inay sidoo kale fiican tahay. Horumar weyn oo ka sarreeya Nepomuk, shaki kuma jiro.
wuxuu ku jiraa Tijaabada!, kaalay dhinaca mugdiga ah ee xD
Hehe, kuma dhicin, waxaan jecelahay bakhaarka Chakra stable
Maalmihii aan ku tijaabinayay Baloo gudaha Arch waxaan aad ula dhacay xawaarahiisa, waa run. Waxay gaari doontaa Chakra, ma jiro wax degdeg ah oo dhinacayga ah. Iyo hadaan joojiyo inaan ka fikiro: Baloo wuxuu 1 ilbiriqsi ku qaataa inuu helo faylka x, Nepomuk wuxuu qaataa 4 ilbidhiqsi ... Runtii, miyaanan sugi karin 3 ilbidhiqsi oo dheeri ah? Waxaan ku noolahay mashquul aan micno lahayn ... 😉
ugu dambayn kubuntu may ahayn wixii aan filayay. Waxaan rajaynayey in barnaamijyada qaar ee fedora ku dhaqmayeen ee ku saabsan kubuntu ay ahaayeen kuwo hagaagsan… oo waxay u soo baxday si kale. iyadoo la cusbooneysiinayo fedora avidemux ee ugu dambeysay, tusaale ahaan, taas oo bilowgii tuurtay khaladaadka qaar, waxay si yaab leh u socotaa inta ay ku jirtay kubuntu, marka lagu daro adeegsiga nooca gadaal u dhaca, waxay soo tuuraysaa khaladaad mana si fiican u aqriso faylasha qaarkood.
maloo sheego baloo. Qaar waxay dhahaan waxay u shaqeysaa si qumman, kuwa kale ma shaqeeyaan, kuwa yiraahda in uusan sifiican ushaqeynin waxay dhahaan waxay hayaan feylal waawayn, halka kuwa dhib la'aan usocda aysan xusin faahfaahinta. Waxaan hayaa feylal aad u waaweyn oo fara badan iyo baloo si xun u socday. Waxay ahayd inaan si dhakhso leh u joojiyo.
marka dib ugu noqo feedorite mar dambe XD
Waa noocii ugu horreeyay ee kde ee maahan inaan joojiyo…. Xitaa ma ogi inay shaqeyneyso. Waxay umuuqataa in magaca badalay layaab badan :).
Waxay umuuqataa in waxbadan loobaahanyahay in lasameeyo.
Tani waa xiriiriye ka socda mid ka mid ah horumarinta KDE->
Ku jawaab didaz
maqaalku waa mid duugoobay maadaama uu yahay nooc duug ah oo kde ah
Ku rakibida qalabka VIT A3301 ee Canaima 4